जापानी मa्गा र एनिमे !! सर्वश्रेष्ठ आकर्षण, पसल, स्थान! - Best of Japan
जापानमा धेरै लोकप्रिय एनिमेसन र मंगा छन्। यदि तपाईं एनिमेसन र मa्गामा रुचि राख्नुहुन्छ भने जापानमा यात्रा गर्दा तपाईं किन सम्बन्धित सुविधाहरू र पसलहरूमा जानुहुन्न? मलाई लाग्छ कि यो स्थानको भ्रमण गर्न पनि चाखलाग्दो छ जहाँ ठूलो हिट एनिमे अवस्थित छ। यस पृष्ठमा, म सम्बन्धित सुविधाहरू, पसलहरू र एनिमेसनको स्थानहरू र जापानमा मंगा प्रस्तुत गर्दछु।
सर्वश्रेष्ठ एनिम आकर्षण र पसल
सर्वश्रेष्ठ एनिमे सम्बन्धित घटनाहरू
सर्वश्रेष्ठ स्थान दृश्यहरू
राम्रो cosplay केटी क्रोधित अनुहार देखाउँदै = AdobeStock
J-World मा Shonen जम्प पत्रिका, Ikebukuro, टोक्यो = शटरस्टक
जे-वर्ल्ड टोकियो एक इनडोर थीम पार्क हो जहाँ आगन्तुकहरू केटाहरूको हास्य पत्रिका "जम्प" जस्तै वन पीस, ड्र्यागन बल, नरुटो जस्ता मजा लिन सक्छन्।
यो थिम पार्क सनशिन सिटीको तेस्रो तल्लामा अवस्थित छ - टोकियोको इकेबुकुरोमा वर्ल्ड इम्पोर्ट मार्ट भवन। इन्टर गर्ने क्रममा, "जम्प" को कार्टुनमा देखा पर्ने धेरै अक्षरहरू वरिपरि प्रदर्शित हुन्छन्। त्यस पछाडि त्यहाँ विभिन्न आकर्षणहरू छन् जुन एक टुक्रा, ड्र्यागन बल, नारुटोको संसारलाई मूर्त रूप दिन्छ। तपाईं विभिन्न अक्षरहरूको आकृतिसहित मूल खानाहरू पनि खान सक्नुहुन्छ।
जे - वर्ल्ड टोकियोमा, पाठ्यक्रम, केटाकेटीहरू खेल्दै छन्, तर वयस्कहरूले सबैभन्दा खुशीसाथ खेल्दैछन्।
>> जे-वर्ल्ड टोकियो को विवरणको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
एनिमेट इकेबुकुरो, एनिमेट अकिहाबारा
एनिम स्टोरफ्रन्ट एनिम विज्ञापन पोस्टर, अकिहाबरा, टोक्यो = शटरस्टकको साथ कभर गरिएको
एनिमेट एक विशेषता स्टोर श्रृंखला हो कि एनिमेसन, मa्गा, खेलको सम्बन्धित सामान बेच्छ। जे होस् एनिमेट स्टोरहरू जापानको चारैतिर अवस्थित छन्, त्यहाँ अकिहाबारा र टोकियोको इकेबुकुरोमा विशाल स्टोरहरू छन्। विदेशबाट धेरै पर्यटक यी दुई स्टोरहरूमा आउँदछन्।
एनिमेटको विशाल पसलहरूमा, एनिमेसन र मa्गा-सम्बन्धित पुस्तकहरू र तथ्या (्कहरू (त्यहाँ धेरै धेरै छन्!), कोस्प्लेका लागि पोशाकहरू र यस्तै अन्य धेरै पूरा छन्। यदि तपाईंलाई एनिमेसन, मa्गा, खेलहरू मनपर्दछ भने, तपाईं निश्चित रूपमा स्टोरको वरिपरि हिँड्न सक्नुहुन्छ र लामो समयको लागि यो आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं अकिहाबरा अन्वेषण गर्न चाहानुहुन्छ, कृपया एनिमेट अकिहाबाराको विशाल भण्डार पत्ता लगाउनुहोस्। यदि तपाईं एनिमेसन वा मa्गामा खासै रुचि राख्नुहुन्न भने पनि, तपाईं यस स्टोरमा जापानी पप संस्कृतिको वातावरणको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
एनिमेटमा थप जानकारीको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
NAKANO BROADWAY: NAKANO BROADWAY टोकियोको नाकानो वार्डमा किनमेल केन्द्र हो। शपिंग मल जापानी उप-संस्कृतिहरू = शटरस्टकको केन्द्रहरू मध्ये एक हो
नाकानो ब्रॉडवे, टोक्यो, जापान = शटरस्टकमा दर्शकहरूले खेलौनाहरू हेर्छन्
नाकानो ब्रॉडवे एक दर्शनीय स्थल हो जसलाई जापानको उपसंस्कृतिको पवित्र ठाउँ भनिन्छ। यो पुरानो जटिल भवन हो जुन टोकियोको पश्चिमी भागमा JR Nakano स्टेशनको उत्तर एक्जिटबाट minutes मिनेट पैदल छ। यस भवनको पहिलो फ्लोरदेखि चौथो फ्लोरसम्म थुप्रै पसलहरू छन्। पहिले धेरै सामान्य पसलहरू जस्तै ताजा खाद्य स्टोरहरू पहिले प्रयोग गरिएको थियो, तर १51990 ० को दशकदेखि एनिमेसन र मa्गासँग सम्बन्धित क्विर्की पसलहरू धेरै वृद्धि भएको छ। आज एनिमेसन, मa्गा र खेलहरू मन पराउने मानिसहरूका लागि साना पसलहरू भेला हुन्छन्, शicious्कास्पद र रमाइलो वातावरण बनाउँदछ (अवश्य पनि सुरक्षा एकदम राम्रो छ!)।
नाकानो ब्रॉडवे अकिहाबरासँग मिल्दोजुल्दो छ कि धेरै स्टोरहरूले एनिमेसन र मa्गा जस्ता सम्बन्धित सामानहरू बेच्छन्। तपाईं Nakano ब्रॉडवे "सानो अकिहाबरा" को रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि नाकानो ब्रॉडवे स्टोरहरूमा, धेरै पुराना गुडिहरू अकीहाबरा भन्दा बढी बेचिन्छन्। नाकानो ब्रॉडवेमा त्यहाँ रेट्रो वातावरण छ। यो बिन्दु नाकानो ब्रॉडवेको ठूलो सुविधा हो। यस बिचित्रको वातावरणको आनन्द लिन विभिन्न पुस्ताका मानिस र महिलाहरू भेला हुँदैछन्।
नाकानो ब्रॉडवेको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
शैतान केटी cosplay हेलोवीन महिला सेक्सी ग्लैमर = शटरस्टक
जम्प शप एक विशेष स्टोर हो जसले "जम्प" कार्टुन म्यागजिनको मौलिक सामान र सम्बन्धित सामान बेच्छ जुन एक टुक्रा, ड्र्यागन बल, नारुतो जस्ता उत्कृष्ट कृतिहरू उत्पादन गर्दछ। जम्प शप देशभरका प्रमुख शहरहरूमा सेंडाई, टोकियो डोम, टोकियो स्काई ट्री, टोकियो स्टेशन, ओसाका उम्मेडा, हिरोशिमा र फुकुओका सहित प्रमुख शहरहरूमा अवस्थित छ।
जम्प शप स्टोर जानकारी को बारे मा विवरण को लागी, कृपया तल आधिकारिक वेबसाइट मा हेर्नुहोस्। दुर्भाग्यवस आधिकारिक वेबसाइटमा अ English्ग्रेजीमा लेखिएको कुनै पृष्ठ छैन। यद्यपि, प्रत्येक स्टोर जानकारीमा सानो वर्ग चिन्ह क्लिक गर्नाले छुट्टै पृष्ठमा गुगल नक्सा प्रदर्शन गर्दछ। गुगल नक्शाको साथ तपाईं यसलाई आफ्नो मनपर्ने भाषामा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ।
>> जम्प शपको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
पोकेमोन सेन्टर पोकेमोन सम्बन्धित उत्पादनहरूका लागि विशेष स्टोर हो। तपाईं भरपर्दो जनावरहरू, आंकडा, तौलिए, रूमाल, शर्ट, आदि खरीद गर्न सक्नुहुन्छ पोकेमोन पात्रहरूको यो स्टोरमा।
पोकेमोन केन्द्रहरू देशभरका प्रमुख शहरहरूमा साप्पोरो, सेन्दै, टोकियो, स्काइट्रे टाउन (ओशिआज), टोकियो-बे (चिबा), योकोहामा, नागोया, क्योटो, ओसाका, हिरोशिमा, फुकुओका लगायतका छन्। टोकियो स्काई रूखका पसलहरू धेरै भीडभाड छन्।
>> विवरणका लागि, कृपया पोकेमोन सेन्टरको आधिकारिक साइट हेर्नुहोस्
Ghili संग्रहालय Mitaka
गिबली संग्रहालय मिताका, टोकियो, जापान = शटरस्टकमा खुला बगैंचामा रोबोटको मूर्ति
के तपाईंले कहिल्यै एनिमेटेड चलचित्रहरू हेर्नुभएको छ जस्तै "मेरो नेबर टोटोरो" र "होलको मूभिंग क्यासल" स्टुडियो गिब्ली द्वारा निर्मित?
यदि तपाइँ स्टुडियो गिब्ली फिल्महरूका प्रशंसक हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि पश्चिमी टोकियोको मिताकाको गिबली संग्रहालय मिताकामा। यस संग्रहालयमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कि कसरी एनिमेटेड फिल्म बनाईन्छ, वास्तविक प्रक्रिया सजिलै बुझ्ने तरीकाले प्रस्तुत हुन्छ। यस संग्रहालयमा थुप्रै पात्रहरू छन्, जुन स्टुडियो गिब्लीका चलचित्रहरूमा देखा पर्दछ।
मैले निम्न लेखमा Ghili संग्रहालय Mitaka परिचय। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने तल लेख हेर्नुहोस्। मैले लेखमा भनेझैं कृपया नोट गर्नुहोस् कि यो संग्रहालय अग्रिम रूपमा बुक गर्नुपर्नेछ।
Ghili संग्रहालय Mitaka को विवरणको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
क्योटो अन्तर्राष्ट्रिय मa्गा संग्रहालय
क्योटो, जापानमा अक्टोबर २,, २०१ October मा "फिनिक्स"। २०० in मा क्योटो इन्टरनेशनल मa्गा म्यूजियमको प्रतीकको रूपमा टिट्जुका प्रोडक्शन्सको साथ क्योटो शहरले सिर्जना गरेको थियो।
क्योटो अन्तर्राष्ट्रिय मa्गा संग्रहालय जापानको सबैभन्दा ठूलो कार्टुन संग्रहालय हो। यो संग्रहालय क्योटो सेइका विश्वविद्यालय र क्योटो शहरले २०० Ky मा क्योटो शहरमा विद्यालयहरूको नवनिर्माण गरेर स्थापना गरेको हो। क्योटो सेइका विश्वविद्यालय "अ Mang्ग्रेजी" मा Mang्गाको एक अद्वितीय विश्वविद्यालय हो।
क्योटो अन्तर्राष्ट्रिय मa्गा संग्रहालय क्योटो शहरको बीचमा रहेको करसुमा ओइक सबवे स्टेशनबाट २ मिनेट पैदल छ। यो संग्रहालयमा जापानी पुरानो म magaz्गा पत्रिकाहरु, समकालीन लोकप्रिय मa्गा पुस्तकहरु, विश्व हास्य पुस्तकहरु, र यस्तै अन्य संग्रह छ। ती मध्ये कम्तिमा 2०००० सम्म पुग्छ।
यस सum्ग्रहालयको भित्तामा एक बुककेस छ जसमा कम्तिमा २०० मिटर विस्तार गरिएको छ, करीव 200०,००० पुस्तकहरू त्यहाँ प .्क्तिबद्ध छन्। तपाईं यस बुकशेल्फबाट आफ्नो मनपर्ने मa्गेलाई पुनःप्राप्त गर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै जापानी कमिक पुस्तकहरु अ English्ग्रेजी, चिनियाँ, स्पेनिश, पोर्तुगाली, आदि मा अनुवाद गरिएको छ, ताकि तपाईं यसलाई पर्याप्त रमाईलो गर्न सक्षम हुनु पर्छ।
माथिको तस्वीर यस संग्रहालयमा एक विशाल वस्तु (लम्बाई 4.5. m मीटर × चौडाई ११ मीटर) हो। यो चरा प्रख्यात मa्गा कलाकार ओसामु टेडूका उत्कृष्ट कृति "फिनिक्स (हाई नो नो तोरी = आगोको चरा)) मा देखा पर्ने मुख्य पात्र हो। त्यहाँ धेरै वस्तु छन् यस वस्तुको अगाडि फोटो खिच्न।
क्योटो अन्तर्राष्ट्रिय मa्गा संग्रहालयसँग पनि क्याफे र संग्रहालय पसल छ मूल चीजहरू बेच्ने।
>> क्योटो अन्तर्राष्ट्रिय मa्गा संग्रहालयको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
तेजुका ओसामु मa्गा संग्रहालय
तेजुका ओसामु मa्गा संग्रहालय टकाराजुका, जापान = शटरस्टकमा
के तपाईंलाई तेजुका ओसामुको मास्टरपिसहरू थाहा छ जस्तै "ASTRO BOY (Might Atom)" "राजकुमारी नाइट (Ribon No Kisi)" "Kimba, The White Lion" "Black Jack" "Phoenix (हाय No Tori)"?
तेजुका ओसामु एक मa्गा कलाकार हुन् जसलाई जापानी हास्य प्रेमिकामा "भगवान" पनि भनिन्छ। १ 1989 XNUMX in मा तेजुका ओसामुको ठूलो संख्यामा मास्टरपिस छोडेपछि मरे। त्यसपछि, तेजुका ओसामु मa्गा संग्रहालय टाकोराजुका शहर, ह्योगो प्रान्तमा स्थापना भयो, जहाँ उहाँ लामो समय बस्नुहुन्थ्यो।
तेजुका ओसामु मa्गा संग्रहालय कुनै ठूलो संग्रहालय होइन। यद्यपि धेरै कमिक प्रेमीहरू यस संग्रहालयमा आउँछन्, जापानबाट मात्र नभई विदेशबाट पनि।
यस संग्रहालयमा, तपाईं करीव २००० टेजुका ओसामु सम्बन्धित पुस्तकहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, तपाईं तेजुका ओसामुको एनिमेसन खोजी र तिनीहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ।
तेजुका ओसामुसँग सम्बन्धित सामानहरू पनि प्रदर्शन गरियो। थप रूपमा, त्यहाँ एउटा संग्रहालय पसल र क्याफे छ।
>> तेजुका ओसामुको सामान्य आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
>> तेजुका ओसामु मa्गा संग्रहालयको विवरणको लागि कृपया यस साइटको भ्रमण गर्नुहोस्
जब तपाईं यो संग्रहालयमा जानुहुन्छ, तपाईंले यो साइट जाँच गर्नु पर्छ कि यो संग्रहालय खुल्ला छ कि छैन।
जापानमा विभिन्न एनिमेसन सम्बन्धित घटनाहरू छन्। ती मध्ये सबैभन्दा ठूलो भनेको टोकियो बिग साइट, टोकियोको एरियाकमा अवस्थित प्रत्येक वर्ष २ दिन मार्चको अन्तमा आयोजित "एनिमे जापान" हो।
एनिमे जापान २०१ 2014 देखि वार्षिक रूपमा आयोजित छ। यो दुई anime सम्बन्धित घटनाहरू संयोजन गरेर शुरू भयो। एनिमे जापानको स्थानमा, एनिमेसन सम्बन्धित विभिन्न व्यवसायको प्रस्तुतीकरणहरू सम्पन्न भए। अर्कोतर्फ, एनिमेसन फ्यानहरूको लागि, धेरै एनिमेसन कार्यक्रमहरू र कुराकानी कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छन्। धेरै cosplayers यस स्थल मा आउँछन्। मलाई लाग्छ कि उनीहरूको प्रदर्शन हेर्नको लागि यो धेरै चाखलाग्दो छ।
>> एनिमे जापानको विवरणहरूको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
एनिमेटेड कार्यहरू उत्पादन गर्दा, उत्पादकहरूले प्राय: कथाहरू र चित्रहरू वास्तवमै अवस्थित सुन्दर स्थानहरूको सन्दर्भमा निर्णय गर्छन्। त्यसोभए, एनिमेसन फ्यानहरू बीच, त्यहाँ स्थानमा पुग्न धेरै मानिसहरू छन् जुन उनीहरूको मनपर्ने एनिमेसनको मोडेल बन्न पुगे। यहाँ, म प्रतिनिधि जापानी एनिमेसन कार्यहरूको स्थान परिचय गर्दछु।
तपाईंको नाम (किमी नो ना वा) = टोक्यो, हिडा, आदि।
टोक्योमा सुगा तीर्थमा जाऔं! नक्सा
सुगा जिन्जा तीर्थ, योत्सुया, टोक्यो, जापानमा
के तपाईंले माकोोटो शिन्काईको "तपाईंको नाम" देख्नुभयो? (२०१ 2016)? यो एनिमेटेड फिल्म टोकियोमा बस्ने केटा टाकी र हिड्समा हिडामा बस्ने केटी मित्सुहाको प्रेम कथा हो। यो चलचित्र विश्वव्यापी रूपमा हिट भयो। यदि तपाईंले कहिल्यै "तपाईंको नाम" देख्नुभयो भने, तपाईं जापानमा यस फिल्मको स्थान स्थानमा किन जानुहुन्न?
"तपाइँको नाम" को स्थानको बारेमा। मैले विस्तृत लेख लेखें। यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
के तपाईंले माकोोटो शिन्काईको "तपाईंको नाम" देख्नुभयो? यो एनिमेटेड चलचित्र जापानमा बिभिन्न ठाउँहरूका छविहरूका साथ निर्माण गरिएको हो। यस पृष्ठमा, म स्थानहरू प्रस्तुत गर्दछु जुन यस चलचित्रमा देखा पर्‍यो। यी स्थानहरूमा, तपाईं दुबै जापानको सब भन्दा शहरी ठाउँ र सबैभन्दा सुन्दर पारम्परिक आनन्द लिन सक्नुहुन्छ ...
स्लैम डन्क = कामकुरा
हुनसक्छ तपाई ह्रुकोलाई भेट्नुहुनेछ! नक्सा
एनोशिमा डेन्टेत्सु लाइनको कामकुरा कोको स्टेशन फिल्म र नाटक स्थानका लागि प्रयोग हुने प्रसिद्ध ठाउँ हो
"स्लैम डन्क" कार्टुनिस्ट तेहिको INOUE को मास्टरपिस हो। १ 1990 XNUMX ० को दशकमा यो हास्य पत्रिका "जम्प" मा क्रमबद्ध गरिएको थियो, एनिमेसन र खेलहरू पनि उत्पादन गरियो। स्लैम डन्क एक सबैभन्दा हिट मa्गा हो।
स्लैम डन्कको कथा कानागावा प्रान्तको शोनान जिल्लाको उच्च माध्यमिकमा सेट गरिएको छ। मुख्य पात्र हनामिची सकुरागी एक सुन्दर केटी Haruko द्वारा आमन्त्रित छ र यस हाई स्कूल मा बास्केटबल शुरू।
यदि तपाईंले स्लेम डन्क देख्नु भएको छ भने, तपाईंले सायद माथिको फोटोको दृश्य सम्झनुहुनेछ। यो रेलमार्ग कनागावा प्रान्तको एनोशिमा इलेक्ट्रिक रेलवेको कनकुरा-कोकोमा स्टेशनको छेउमा छ। यो दृश्य दृश्यको नमूना बन्न गयो जुन पटक पटक स्लेम डन्कमा देखा पर्दछ।
यदि तपाईं यस रेलमार्ग क्रसिंगको अघि खडा हुनुभयो भने, तपाईं पक्कै पनि स्लैम डन्कको संसारमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। तपाईंको अगाडि सुन्दर समुद्र फैलिन्छ। यदि यो घाममा छ भने, तपाईं साँझ मा अद्भुत सेटिंग सूर्य देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्षेत्र पर्यटन गन्तव्यको रूपमा प्रसिद्ध छ। तपाईं किन Enoshima इलेक्ट्रिक रेलवे मा जाने र कामकुरा वा Enoshima नजिकै जाने छैन?
यदि तपाइँ रुचि राख्नुहुन्छ भने, कृपया जापानी पप संस्कृति आदि मा निम्न लेख पढ्नुहोस्।